🥇 ▷ sawirada rasmiga ah ee ugu horeeya ee ay daabacday shirkadu ✅
sawirada rasmiga ah ee ugu horeeya ee ay daabacday shirkadu
OnePlus 7T wuxuu sifeynayaa faahfaahinta bilowgiisa. Haddii Isniintii la soo dhaafay waxaan aragnay ku dhawaaqista dhacdada oo soo bandhigidda dhacdada ay dhici doonto – laba dhacdo, run ahaantii -, hadda Shirkadda lafteedu waxay soo bandhigaysaa mid ka mid ah astaamaha ugu faallooyinka ee toddobaadyadii la soo dhaafay ku saabsanaa terminal-ka: qaabkiisa.
Waxay ahayd daabicis in Pete Lau, oo ah madaxa shirkadda, uu bulshada dhexdeeda ku sameeyay in sumaddu u furan tahay inay la socoto dhammaan dadka raacsan. “Maanta, waxaan sameyn doonnaa wax aan waligeen horay u sameynin: soo bandhigida naqshadda calankeenna xigta marka hore beesheena,” wuxuu ku bilaabmayaa isagoo sharraxaya maqaal halkaas oo uu faahfaahin ka bixiyo shirkada jacaylka ay u qabaan naqshadeynta iyo muhiimadda ay u leedahay calankeeda.
Bilowgii, naqshaddu waxay ahayd mid ka mid ah tiirarkeenna aasaasiga ah, qaybna ka mid ah falsafaddayada aan weligeed la dejin. Taas macnaheedu waa in faahfaahinta aysan aad uga yarayn in la dhammaystiro.
Matagga Matte iyo qolka wareega
Kadib dib-u-eegis kooban oo ku sameysay goobihii hore ee shirkadda, Lau wuxuu shaaca ka qaaday in nashqadeynta cusub ay tahay “meel siman oo jilicsan oo leh dhalaalaya dhalaalaya”, qeexitaan la jaan qaadi kara ilaa xad dib dambe ee iPhone 11 Pro cusub. Marka xigta, wuxuu usocdaa inuu faallo ka bixiyo muuqaalka kaamirada, oo markan qaadaa qaab wareeg ah markii ugu horreysay taariikhda OnePlus, difaacida dhaqdhaqaaqa qaabkan soo socda iyo lasocoshada qoraalka sawirada cinwaan u ah qodobka ka dibna:
Cidhifyada wareegsan ee wareegga waxay soo saaraan isbarbardhig soo jiidasho leh oo leh khadadka toosan ee qaabka afar geeska ah ee casriga ah dareenka isku-dheelitirka iyo isku dheelitirka. Ka dib markaan soo marnay in kabadan konton naqshadeynta naqshadeynta, waxaan aaminsanahay inaan gaarney wax shay qaas ah.
The OnePlus 7T waxaa shaaca looga qaadi doonaa India bisha Sebtember 26, iyadoo lagu wado munaasabad caalami ah oo loo qorsheeyay Oktoobar 10.